Masar oo dishay qaar kamid ah Mucaaradka ka soo Horjeeda – Radio Daljir
Masar oo dishay qaar kamid ah Mucaaradka ka soo Horjeeda
Maajo 17, 2015 7:22 b 0
Axad, May 17, 2015 (Daljir) — Xukuumadda Masar ayaa sheegtay inay dal-dashay lix qof oo lagu eedeeyay xagjirnimo, iyagoo sheegay in dadkaas ay ka mid ahaayeen urur jihaad-doon oo doonaya inay dalka Masar ka sameeyaan qalalaase iyo colaado.
Saraakiil u hadlay dowladda Masar ayaa xusay in Raggaan la dal-dalay lagu helay dambi ah inay weerar gaadmo ah ku qaadeen bishii saddexaad ee sannadkan laba gaari oo ciidammo ka tirsan kuwa Masar ay saarnaayeen, ayna dileen laba askari.
Raggan ayaa la Sheegay inay ka tirsan yihiin Ururka Ansar Bayt al-Maqdis oo dhawaan ku dhawaaqay inuu ku biiray Ururka Daacish/ISIS. Iyadoo kooxdan oo ku dhuumaaleysanaya deegaanka Siinaay ay dhowr jeer weerarro ku qaadeen ciidamada Masar.
Bishii Afaraad ee Sannadkan ilo ka tirsan laamaha Amaanka ee Masar ayaa sheegay in 15-askari iyo labo shacab ah ay ku geeriyoodeen weerar lagu qaaday bar-kontrool oo ku taalla magaalada Sheekh Zuweid.
Dawladdu waxay deegaanadaas kawadaa hawlgallo ay ku xaqiijinayso amniga deegaankaas. Balse sannadkan kaliya ayay ciidamo iyo shacab fara badan lagu dilay Waqooyiga Siinaay.
Sdioo kale, Dal-dalaadda Lixdaan Ruux ayaa kusoo Beegmaysa iyadoo shalay ay xukun ku ridday maxkamadda Masar madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Mursi iyo in ka badan boqol oo kale oo qaarkood ay dibadda dalkaas ku maqan yihiin.
Ugu dambeyn, Xukuumadda Dalka Masar ayaa Horay uga Mamnuucday Dalkeeda Ururka Akhwaanul Muslimiin oo ay sheegtay inuu yahay urur argagaxiso, isla markaana taageersan madaxweynihii hore ee dalkaas Mursi.